I-Google Chrome 75 ifika ngemodi yokufunda, i-PIN yokufakazela ubuqiniso nokuningi | Kusuka kuLinux
I-Google Chrome 75 ifika ngemodi yokufunda, i-PIN yokufakazela ubuqiniso nokuningi
Muva nje IGoogle isanda kumemezela ukwethulwa kwenguqulo entsha yesiphequluli sayo sewebhu se-Chrome 75 eza nezindaba nokulungiswa kwamaphutha, futhi ngasikhathi sinye, inguqulo ezinzile yephrojekthi yeChromium yamahhala iyatholakala, esebenza njengengqikithi ye-Chrome.
Ngaphezu kokulungiswa nokulungiswa kwamaphutha enguqulweni entsha, Ukuba sengozini okungu-42 okukhonjisiwe kulungisiwe ngamathuluzi wokuhlola azenzakalelayo IkheliSanitizer, iMemorySanitizer, iLibFuzzer, ne-AFL.
Azikho izingqinamba ezibucayi ezitholakele ezikuvumela ukuthi weqe wonke amazinga wokuvikelwa kwesiphequluli futhi usebenzise ikhodi kusistimu yakho ngaphandle kwemvelo ye-sandbox.
Njengengxenye yohlelo lwemiklomelo yemali yokuthola ukuba sengozini enguqulweni yamanje, iGoogle ikhokhele imiklomelo eyi-13 ebiza u- $ 9,000 (i-premium eyodwa $ 5,000, imiklomelo emibili $ 1,000, nemiklomelo emine $ 500).
1 Izinto ezintsha ezintsha ze-Chrome 75
1.1 Izinguquko ku-Google Chrome 75 ze-Android
1.2 Olunye ushintsho lungezwe ku-Chrome 75
Izinto ezintsha ezintsha ze-Chrome 75
Ngokufika kwale nguqulo entsha yeGoogle Chrome 75 singathola ukuhambisana ne-PIN ye-FIDO CTAP2. Lona ingezwe ku-API yokufakazela ubuqiniso be-web ukusebenzisa i-PIN ichazwe ngumsebenzisi ukugunyaza ukusebenza okhiye abasekela umthetho olandelwayo we-FIDO CTAP2.
Esigabeni esithi "Okuthuthukile" kwesihleli, uzothola into ethi "Phatha okhiye bokuphepha", lapho ungabela khona ikhodi ye-PIN ukuvikela okhiye ababekwe kudrayivu ye-USB, kanye nenketho yokusetha kabusha ukhiye (susa yonke idatha ne-PIN).
Futhi ngaphakathi kwezinguquko ezinkulu zale nguqulo entsha sizothola umsebenzi we-Scroll Snap Stop que ingeziwe ukuze kuchazwe ukuthwebula izinto ngenkathi kuskrolwa ikhasi (Isibonelo, ukuthinta okubanzi lapho kukhethwa ohlwini lwezithombe kuzoholela ekukhetheni hhayi into yokugcina, kepha okulandelayo).
Enye into entsha eza kuGoogle Chrome 75 ukufika kosekelo lokuhlola lwemodi yokufunda uma inikwe amandla, kukhonjiswa kuphela umbhalo ozwakalayo futhi zonke izilawuli ezihambisanayo, amabhanela, amamenyu, imigoqo yokuzulazula, nezinye izingxenye zekhasi ezingahlobene nokuqukethwe kufihliwe.
Ukunika amandla ukusekelwa kwemodi entsha kwenziwa ngenketho chrome: // amafulegi / # vumela-imodi yokufunda, ngemuva kwalokho kuvela into kumenyu yokudonsela phansi ukuze isetshenziswe.
Futhi yabo bonke abasebenzisi benguqulo yedeskithophu, futhil imodi yokuhlukaniswa nendawo okuzenzakalelayo okuqinile inikwe amandla, lapho amakhasi abaphathi abahlukahlukene ahlala etholakala kwimemori yezinqubo ezahlukahlukene, ngayinye esebenzisa ibhokisi layo lesihlabathi.
Isici esiyinhloko imodi yokuhlukanisa ngokuqinile ukwahlukaniswa hhayi ngamathebhu, kepha yizizinda, okungukuthi, uma ngaphambi kokuqukethwe kwezikripthi, iframe namafayela ezigaxekile alandwe kwezinye izizinda ayesebenza ngenqubo efanayo nesayithi lesisekelo, manje azohlukaniswa abe izinqubo ezihlukile.
Izinguquko ku-Google Chrome 75 ze-Android
Kuhlobo lwe-Android, isikhombimsebenzisi semingcele ye-akhawunti kumafomu senziwe ngcono ubuqiniso.
Lapho ibhulokhi yethulusi seliboniswa ngqo ngaphezulu kwekhibhodi esesikrinini futhi lapho uchofozwa, izinketho ezilondoloziwe ezingakhonjiswa ziboniswa esikhundleni sekhibhodi esesikrinini, ngaphandle kokufihla ifomu lokufaka.
Olunye ushintsho lungezwe ku-Chrome 75
Kwezinye izinguquko ezingagqanyiswa kule nguqulo entsha ye-Chrome 75 yilezo imininingwane ehlukile ngesimo sezindawo zokuphumula inikezwa kubha eseceleni ye-debugger kuhlotshaniswa nezingxenye ngazinye zezisho eziyinkimbinkimbi kulayini (i-inline breakpoint), ngokwesibonelo, izindlela ezisethwe entanjeni.
Kungezwe ukusekelwa kokufinyelela i-DNS ngaphezulu kwe-HTTPS (DoH, DNS ngaphezulu kwe-HTTPS) kuzinguqulo zokuhlola zeCanary, ezinganikwa amandla ku-chrome: // flags # dns-over-https.
I-DoH ingaba wusizo ekuqedeni ukuvuza kolwazi mayelana namagama wababungazi abaceliwe ngamaseva abahlinzeki be-DNS, ukulwa nokuhlaselwa kweMITM, nokufaka ithrafikhi esikhundleni se-DNS.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Google Chrome 75 ifika ngemodi yokufunda, i-PIN yokufakazela ubuqiniso nokuningi
Hlukanisa i-Intanethi ngokweqile: Amanethiwekhi asetshenzisiwe kanye namaseva azimele
I-LPIC: Yini okufanele siyifunde ukuba ngungoti weLinux?